ကောင်းသော်နေ့တနေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကောင်းသော်နေ့တနေ့
Posted by ပိုင်လေး on Aug 3, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
၀ါဆိုလပြည့်နေ့ – အိမ်ကဘုရားစင်လေးပါ
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ..။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ..။ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ..။
နေညအချိန်မရွေး ကြည်ညို သပ်ပါယ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား
အိမ်က ဘုရားစင်ကျနေတာပဲ.. ( မနေ့က ရေမွှေးနှင်းဆီပဲ ကပ်ဖြစ်လိုက်တယ်)
သာဓုပါရှင်.. သာဓု..သာဓု (ကောင်းလေစွတကား)..
(ဒါနဲ့.. ဘယ်တော့ ဆွမ်းတော်စွန့်မှာလဲဟင်.. )
သာဓု ၊သာဓု၊ သာဓုပါရှင်
ကြည်ညိုစွာနဲ့ ဖူးမျှော်ရပါတယ် ဗျို့ 
ဘုရားစင်တစ်ခုကို အခုလို မြင်လိုက်ရတာ …… ရင်ထဲအေးသွားသလိုပါပဲ ။
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားကထင်ပါတယ် …. အဝေးရောက်နေပေမယ့် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့လေးကို ထူးထူးခြားခြားနဲ့ ပို့စ်တင်ဖြစ်တာ မြတ်စွာဘုရားကို ရင်ထဲမှာ ရှိနေတာ ပေါ်လွင်ပါတယ် ….. သစ်သီး(၉)မျိုးဆွမ်းလေးတွေ ပန်းတော်တွေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို သေသေချာချာပူဇော်ထားတာ အရမ်းကို သပ္ပါယ်ပါတယ် ……. မတတ်တတတ် ၀င်ပြောခွင့်ပြုပါနော် … ညီမလည်းအရင်က ဆွမ်းကပ်ရင် ကိုပိုင်လေးလို သစ်သုံးကိုအလုံးလိုက်ပဲကပ်ဖြစ်ပါတယ် ….. နောက်ပိုင်း သေချာစဉ်းစားပြီး သူများတွေပြောတာများလာတော့ သစ်သီးဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းတော်ကပ်တာကို ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့မိတယ် … မြတ်စွာဘုရားဟာ ရဟန်းသံဃာတော်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်လှူရင် သစ်သီးလေးတွေကို ခွဲစိပ်လှူဒါန်းလေ့ရှိသလို ညီမလည်း မြတ်စွာဘုရားကို ဆွမ်းကပ်တိုင်း သစ်သီးလေးတွေ ခွဲစိပ်လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့တယ် …. နောက်တစ်ခုက ဆွမ်းတော်နဲ့ဆွမ်းဟင်းကပ်တာပါ …. အရင်ကတော့ ဆွမ်းတော်ပန်းကန်တွေကို သေးသေးလေးတွေနဲ့ကပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် အခုတော့ ပန်ကန်ပြားနဲ့ဆွမ်းဟင်းနဲ့ ဇွန်းတပ်ပြီး သက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကို ကပ်သလို လှူဒါန်းကပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ……. ထိုကဲ့သို့လှူဒါန်းတာကို အချို့သောသူတွေရဲ့အိမ်မှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရလို့ အတုလိုက်ယူမိခြင်းဖြစ်ပါတယ် ……
ပိုတယ်ရှည်တယ်ထင်ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါနော် ကိုပိုင်လေး ….
“ဒီ မြန်မာပြည် ကို ရင်နင့်အောင်ချစ်တဲ့တရုတ်ပါ။” ဒီစာလေးကြောင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာချင်း သိတာလေးတွေ ဖလှယ်တဲ့သဘောပါနော် …….
ကြားဖူးတာကတော့လေ… ရဟန်းတော်တွေအနေနဲ့ အပင်ပြန်ပေါက်စေတဲ့ အစေ့တို့ ဘာတို့ကို ဖယ်ရှားပြီးတော့ စားလို့မရပါဘူးတဲ့။ အပင်ကို သတ်သလိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ပါတဲ့။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆွမ်းကပ်တဲ့အခါ အဲဒါတွေကို ဖယ်ရှားပြီးတော့မှ ကပ်ရပါတယ်။ ဥပမာ စပျစ်သီးဆိုရင် ဒီအတိုင်းမကပ်ဘဲနဲ့ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး အလယ်က အစေ့ကို ဖယ်ပြီးမှ ကပ်ရပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းတွေကို ရွာထဲက ပို့စ်တစ်ခုမှာလည်း ဖတ်ဖူးလိုက်တယ်.. သိတဲ့သူများ လင့်လေး မစပါ…
ကောင်းသောနေ့လေးပါ တကယ့်ကျက်သရေ မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ နေ့လေး ပါ ။။မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းရင်ပြန်လာခဲ့လေ။
ကောင်းသောနေ့လေးပါ တကယ့်ကျက်သရေ မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ နေ့လေး ပါ ။။မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းရင်ပြန်လာခဲ့လေ